Smashwords – Ahoana no Fivavaka – a book by Dag Heward-Mills
Ahoana no Fivavaka
“Ahoana no tokony fivavako? Mikasika ny inona no tokony ho entiko am-bavaka? Nahoana ny vavaka no tena zava-miafina?Ahoana no hivavahako mandritry ny fotoana lava-be? Tsy efa fantatr’ Andriamanitra sahady ve izay ilaiko? Inona no mitranga raha tsy mivavaka aho? Ho valina marina ve ny vavako?” Jereo ny valin’ ireo fanontaniana ireo eo am-pamakianao ity boky azo ampiharina sady tonga ara-potoana nos More
“Ahoana no tokony fivavako? Mikasika ny inona no tokony ho entiko am-bavaka? Nahoana ny vavaka no tena zava-miafina?Ahoana no hivavahako mandritry ny fotoana lava-be? Tsy efa fantatr’ Andriamanitra sahady ve izay ilaiko? Inona no mitranga raha tsy mivavaka aho? Ho valina marina ve ny vavako?” Jereo ny valin’ ireo fanontaniana ireo eo am-pamakianao ity boky azo ampiharina sady tonga ara-potoana nosoratan’ I Dag Heward-Mills ity.
Tags: madagascar daghewardmills malagasy malagache ahoana no fivavaka